New iTunes 12.4 Kedu ihe ọhụrụ na ụdị ọhụụ a? | Esi m mac
Jesus Arjona Montalvo | | iTunes, Noticias, ọtụtụ
Taa bụ ụbọchị Apple melite. Mmelite ndị a buru ibu iOS 9.3.2, OS X 10.11.5, 2.2.1 nche nche, 9.2.1 tvOS e iTunes 12.4. Yabụ ịntanetị anyị ga-ese anwụrụ ọkụ awa ole na ole na mmelite ndị a.
para OS X 10.11.5 maka tvOS 9.2.1 ha abia na mbido dika mmelite na obere ndozi. Achọpụtaghị ọhụụ ọhụụ ọhụụ, mana oge ụfọdụ mgbanwe dị n'ime dị mkpa karịa atụmatụ kacha mma. Ma gịnị banyere iTunes 12.4?.
Ọ bụrụ na ọ dịchaghị mma na njide emere m, ana m akọwa ozi ọhụrụ ahụ.
Ugbu a na iTunes 12.4 egwu, ihe onyonyo, vidio wdg. ga-enwe ihe kensinammuo imewe. Na mgbakwunye, igodo na-enyere gị aka Mkpọchi 'Back' na 'Forward', chọgharịa n’ọbá akwụkwọ, Apple Musci, Storelọ Ahịa iTunes, wdg..
Ugbu a 'Nhọrọ ọdịnaya' ọ na-eme ka ọ dịrị gị mfe gafere site na ọdịnaya nye onye ozo dika egwu, vidio, ihe onyonyo, ma inwere ike họrọ naanị ihe ndị ị chọrọ ya na ndezi ọrụ.
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, ị nwekwara ike inyocha n'ụzọ ọhụrụ yana sidebar, ịdọrọ songs mfe tinye ha na listi ọkpụkpọ, na ị ga-ahụ naanị ọkacha mmasị gị.
na 'Ndepụta' a iTunes ugbu a dị mfe ma dị mfe iji, ebe ị nwere ike hazie na 'ngosipụta menu' tu 'Ọbá akwụkwọ'. Ya mere, dị ka anyị na-ahụ na mmelite ahụ, ọ dịla a nnukwu mgbanwe na imewe, Na n'ime arụ ọrụ iji mee ka ọ dịrị onye ọrụ mfe ịchịkwa ihe niile masịrị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » New iTunes 12.4 Kedu ihe ọhụrụ na ụdị ọhụụ a?
Emelitere m n'abalị ụnyaahụ. N'ozuzu, ọ dị m mma nke ukwuu, ọ bụ ezie na iTunes emeela m ihe ijuanya, dịka ịghara itinye mkpokọta niile ọnụ.
Zaghachi Jaime Aranguren
Ọ dị ka oge m na-egbu oge, yana akụkụ dị egwu n'oge ahụ, na-enweghị ike ịhụ nke agbakwunyere ugbu a dị ka mmalite nke ọbá akwụkwọ ahụ dum, ugbu a ọ bụ otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ.
Zaghachi ka edy
Akụkụ akụkụ ahụ laghachiri, nke m tụfuru ọtụtụ ihe, n'ihi na ọ mere ka ịgagharị m mfe. Ọ nwere ike ịdị ka ụfọdụ azụ azụ, mana ọganihu niile ọ dị mma? n'ezie ọ bụghị, na anyị kwupụtara na ọtụtụ ugboro ihe anyị nwere oge na nke a. nabata na "backtracking" ma ọ bụrụ na ọ bụ ịgbanwe njehie.
Ebee ka foto ndị ahụ dị? Enwere onye nwere ike ịgwa m otu m ga - esi hụ taabụ ka m nwee ike mekọrịta ha. Daalụ
Nkwado faịlụ gbasiri ike na ntụgharị ọdịyo apụtaghị.